Indonesia in Focus: Pulleys (wiish) dhacayay in Mecca, ku dhinteen ugu yaraan 107 dad sodcaal ah, lix qof ka Indonesia.
Pulleys (wiish) dhacayay in Mecca, ku dhinteen ugu yaraan 107 dad sodcaal ah, lix qof ka Indonesia.
Kortaan ayaa la ma uusan dhammayn (368)
(Qaybta saddex boqol iyo siddeed iyo lixdan), Depok, West Java, Indonnesia, 12 September 2015, 21:50 pm).
Masiibooyinka Pulleys sida dhacay Mecca, kaas oo lagu dilay ugu yaraan 107 dad sodcaal ah, oo ay ku jiraan lix qof oo ka Indonesia waxaa aayaha Ilaah waxa ku qoran kitaabkii:.
Xitaa caleemaha ka dhacay laamaha ayaa la dhigay 50,000 oo sano ka hor inta Eebe u abuuray Samooyinka iyo dhulka iyo caalamka oo dhan.
Calamity keentay in dhimashada iyo dhaawaca ka dhaca waxaa dheer ayaa loo magacaabay qaab tijaabo ah, digniin ama cadaab.
Wax walba waxaa leh dadka wanaagsan in dhammaan dadkii ka badbaaday Aakhiro, haddii ay tahay ciqaabta, laakiin ciqaabta Ilaah dardargalinta adduunka, Ilaah waxa uu rabaa inuu addoommadiisa ma u baahan tahay in cadaabka aakhiro (waari) laakiin arrin cadaab adduunka (gaaban iyo Nuur) sida dembigu ah , Markaasay kuwii la dilay markii Hajj ee qaybta ka ah shahiidnimo, (ku jira xaalad ah dembiyadooda oo dhan waa cafiyan Ilaah), si ay jannada ku sugaya dhibanayaasha dhintay. Liqay danta.
Sida digniin ah, maxaa yeelay aadanaha ayaa waxaa durbaba ka socdeen shirk, iyo dilka labada dhinac aadanaha (sameeyaan zholim), oo ay ku jiraan dagaal ee bariga Ukraine, Suuriya, Ciraaq, Afghanistan, North Africa, Yemen iyo damac aadanaha badan xoolo iyo xoog (la wadaajiyo Eebe wadaajin).
(BBC) - Tirada dhimashada ayaa ka Indonesia ay sabab u tahay dayrta ee khafiyad dhacdo in, Haram ee Mecca ee, korodhay ilaa lix.
Dowladda Saudi Arabia ayaa bilaabay in uu hirgaliyo baaritaan lagu dhacdooyinka burburkii saqafka ee khafiyad ah Masaajidka Grand ee Mecca City oo ay ku dhinteen ugu yaraan 107 oo qof, oo ay ku jiraan laba qof oo Indonesian.
Baaritaanka waxaa loo sameeyay soo socda amarka Gudoomiyaha Gobolka Mecca, Prince Khalid al-Faisal, wax yar ka dib markii ay burburtay khafiyad oo cas oo ay beegsadeen Haram, ayaa Jimcihii (11/09).
Horaantii, Agaasimaha Guud ee Hay'adda Difaaca ee Saudi Arabia, Lt. Sulaymaan Bin-Abdullah al-Amr Civil, ayaa sheegay in xawaaraha dabaysha 83 km / h oo culus roobka waa xoog badan yahay sababta keentay shilka.
Arrimaha la xiriira ammaanka dhismaha agagaarka diirada Haram ah.
Number of dhaawac ka soo gaaray 31 qof oo Indonesia.
Dhanka kale, tirada dhibbaneyaasha dhintay ka khafiyad dhacdo dayrta ee Haram gaadhay 107 oo qof, dhaawacayna 230 kuwa kale.
Tirokoobyada ayaa waxaa ka mid ah dhimashada ka Indonesia lix ka mid ah iyaga magacaabay Masnauli Hasibuan ee embarkation Medaan (Mes 09) iyo Siti Rasti Darmini ee embarkation Jakarta-Bekasi (JKS 03).
Tiro ka mid ah muwaadiniinta ay dhibaatada waxaa ka mid ah 31 qof oo ku dhaawacmay. Waxay la daaweeyo meelo kala duwan, oo ay ku jiraan in Isbitaalka An Nuur, Hospital Jahir, iyo Isbitaalka King Abdullah.
Laga soo bilaabo macluumaad ah ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Wasaaradda Arrimaha Diinta, qunsulka guud ee kooxda Indonesia iyo kooxda weli raadinaya Xaaji suurtoobayso in muwaadiniinta kale ee dhibbane ka ah dad sodcaal ah Indonesia ayaa la siiyaa caabuda weyn.
Wasiirka arimaha Diinta ee Lukman Hakim Saifuddin ballan qaaday in dawladdu ay siin lahaa magdhow dhimashada iyo dhaawaca.
"Dabcan ay xukuumaddu bixin doonto magdhow dhimasho iyo dhaawac ayaa soo gaaray jidhka ka naafada ah sida xeerarka caymiska jira in kasta oo dad sodcaal ah," ayuu yiri.
Burburkii Genesis ee khafiyad ee Haram, Mecca, Saudi Arabia, waxa Jimcihii (11/09), ayaa ku dhinteen ugu yaraan 107 qof ay ku dhinteen. Dhacdadan, kaas oo ka dhacay meel ka hor israac Xajka waa mid ka mid ah terfatal ee 28 sano ee lasoo dhaafay.
Halkan waxaa ku sagaal ka mid ah dhacdooyinka ugu dilaa ah oo la xidhiidha fulinta taxane ah oo Hajj ee Saudi Arabia
2015: Ugu yaraan 107 ruux ayaa ku dhimatay iyo boqolaal ayaa ku dhaawacmay markii saqafka khafiyad ah dumay si ay dhici Haram ah.
2006: In ka badan 360 dad sodcaal ah u dhintay tacsida ku tuntay, kuwaas oo qaliin lagu dilo of dhaqan Ibliisku ee Mina, dooxada ku taal cidlada ku oo ku yaalla shan kiiloomitir u jirta magaalada ee Mecca ee. In xilli Xajka ee in, dhismaha sideed heer ah oo u adeegaya sida meel lagu nagaado u dhow masaajidka Grand ay burburtay iyo bidix ugu yaraan 73 qof ay ku dhinteen.
2004: Mass sarreysa ee Mina waxay keentay in boqolaal qof ayaa ku tuntay. Sidaas darteed, 244 qof ayaa ku dhintay oo ku dhaawacmay boqolaal hirgelinta maalin ee ugu dambeysay ee Xajka.
2001: Ugu yaraan 35 xajka u dhintay isriixidda wadareed ee Mina maalinta ugu dambaysa ee Xajka.
In aan ka yareyn laba milyan oo qof raaci Hajj ee Saudi Arabia, sanadkan.
1998: Qiyaastii 180 dad sodcaal ah ayaa lagu tuntay oo argaggax dadweyne ka dib markii dhowr ah oo ka mid ah ka soo dhacay buundooyinka inta lagu jiro dhaqan jumrah fulinta ee Mina.
1997: Ma aha wax ka yar 340 xajka ku dhintay sabab u ah dabka ee ku jirtay teendhada, ehelkeedu waa in Mina ah. In ka badan 1,500 oo qof ay ku dhaawacmeen.
1994: Qiyaastii 270 xajka ku dhintay sabab u tacsida isriixidda inta lagu jiro dhaqan jumrah fulinta ee Mina.
1990: Dhacdadii ugu dhimasho dhacay markii dadweynaha sarreysa galay tunnel-ka taasoo keentay in Mecca. Wadar ah 1,426 qof ay ku dhinteen.
1987: Dagaal u dhexeeya dad sodcaal Iran iyo ciidamada Sacuudiga sababay 402 qof ay ku dhinteen. Fiiro gaar ah dowladda Saudi sheegay in dhibanayaasha ka koobnaa 275 qof oo ka soo jeedo dalka Iiraan, 85 muwaadiniinta Saudi iyo saraakiisha, iyo 42 kuwa kale waa dad sodcaal ah oo dalal kala duwan. Ayaa in ka badan 600 kalena in la dhaawacay.